Fetim-pirenena : Mitohy isan’andro ireo fety hatramin’ny 26 jona -
AccueilRaharaham-pirenenaFetim-pirenena : Mitohy isan’andro ireo fety hatramin’ny 26 jona
18/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanomboka ny fiandohan’ny volana jona, dia maro ireo hetsika entina hanamarihana ny fetim-pirenena malagasy. Hetsika miainga amin’ny lohahevitra hoe « fitiavan-tanindrazana sy filaminana, antoky ny fampandrosoana ho fisandratan’i Madagasikara ». Taorian’ny « Carnaval de Madagascar », dia hanohy ny hetsika anio ny « Fanfare » na ny fampisehoana hiarahana amin’ireo mpitsoka mozikan’ny governemanta na avy amin’ny tafika. Eny Namontana no hanatanterahana izany anio amin’ny 1 ora sy sasany. Hitohy eny Andoharanofotsy ny seho ataon’izy ireo rahampitso talata 19 jona.
Hanomboka ny 20 jona kosa ny Podium izay miparitaka amin’ny faritra samihafa, ka etsy amin’ny kianjan’i Betongolo izany ny 20 jona, eny Antanikatsaka ny 21 jona. Toerana telo kosa no hampiantrano izany Podium hiarahana amin’ny mpanakanto maro izany ny 22 jona, dia Andohatapenaka, Bevalala ary Ivato. Toerana telo toa izany koa ny andron’ny 24 jona dia Anosizato, Ambohimangakely ary Mahitsy. Ankorondrano, Imerintsiatosika ary Sabotsy Namehana kosa ho an’ny 25 jona mialohan’ ny afomanga etsy amin’ny farihin’Anosy manomboka amin’ny 7 ora hariva.
Aorian’ny matso etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina dia hisy ihany koa ny Podium roa lehibe. Ny voalohany amin’izany dia etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ary hiarahana amin-dry Françis Turbo, Tence Mena, Mr Sayda ary Odyai. Etsy amin’ny Coliseum Antsonjombe dia hifandimby hanafana ny sehatra ny tarika Ny Ainga, Marion, Stéphanie, Mijah. Hanentana izany kosa i Honorat.